Casharrada casharrada Android talaabo talaabo ah: uga faa'iideyso mobiladaada | Androidsis (Bogga 27)
Hoyga Facebook, Launcher ama App Full Screen?
Akhlaaqda iyo cilladaha waaweyn ee Guriga Facebook, ma loo tixgelin karaa Launcher mise waa wax badan oo ah codsi shaashad buuxda leh?
Hadda Ciyaaraya Beta Music Music Bilaash ah
Hada Ciyaar waa muusig muusig cusub oo loogu talagalay Android oo ku saleysan koodhka isha ee Apollo Music Player.
Sida loo rakibo Hoyga cusub ee Facebook qalab kasta
Hoyga Facebook ayaa loo heli karaa dhammaan noocyada aaladaha, iyada oo wax laga beddelayo Katana.
Sida loo tirtiro nooca cusub ee Play Store-ka 4.0.25
Cashar fudud oo dib loogu noqdo noocii hore ee dukaanka codsiyada Android, Play Store 4.0.25
Sida loo-xidid-boodhkaaga terminaalka adiga oo hal guji oo keliya ah
Codsi ayaa laga heli karaa Play Store kaas oo noo ogolaanaya inaan Un-Root nooc kasta oo terminal Android ah, nooc kasta oo ay tahay nooca ama nooca Android.
Sida loo soo dejiyo loona rakibo nooca cusub ee Play Store-ka 4.0.25
Halkan waxaan kaaga tagi doonaa nooca cusub ee Google Play ama Play Store 4.0.25, waxaan ku darnaa cashir fiidiyow ah oo ku saabsan rakibiddiisa iyo isticmaalkiisa.
Sida loo isticmaalo hees kasta sida ringtone-ka asalka ah
Casharro kale oo aasaasi ah oo loogu talagalay Android kaas oo aan ku baran doonno inaan u beddelo ringtone-ka asalka ah ee mawduuc kasta oo ka mid ah maktabaddayada muusikada.
Dhamaan dejimaha codsiga Gmail ee aaladaha Android, fiidiyow sharraxaad raaxo leh leh.
Sida loo wanaajiyo xusuusta RAM ee aaladaha Android
Casharro si loo wanaajiyo xusuusta RAM ee aaladdayada Android waxkastoo nooca Android ah.
Sida loo kordhiyo xawaaraha processor-keena
Cashar fudud oo wax looga beddelayo qiimaha ugu sarreeya iyo kan ugu yar ee processor-keena ku shaqeeya nidaamka hawlgalka Android.
Android iyo macruufka, maxaad u doorataa Android?
Dagaalkii Android ee ka dhanka ahaa macruufka kuwani waa waxyaabo gaar ah oo, feker ahaanteyda, siiyo nidaamka cagaaran ee hawlgalka Android sida guuleystaha cad.
Sida loo siiyo muuqaalka iPhone-kaaga Android-kaaga
Laba codsi oo bilaash ah ayaa laga heli karaa Play Store oo aan ku siin doono muuqaalka Apple iPhone iyada oo aan luminayn faa'iidooyinka Android-keena.
Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ROM-yada android-ka
Maanta waxaan ka hadlayaa ROM-yada Android, maxay yihiin? , Faa'iidooyinka iyo qasaaraha iyo Sida ...
Wadahadal Heads, u adeegso Facebook Messenger barnaamij kasta
Mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee ugu caansan Facebook Home waa Chat Heads, oo ah aalad noo oggolaan doonta inaan ka adeegsanno Facebook Messenger dalab kasta.
Sida loo rakibo Soo-kabashada iyo xididka Samsung Galaxy S2 Hercules T989
Cashar ku barashada xididka iyo dib u habeynta qaabka Samsung Galaxy S2 Hercules T989.
Sida loo beddelo SIM Pin-ka aaladaha Android
Caawimaad hage si aad uhesho ikhtiyaarrada nidaamka si aad uga beddesho SIM Pin qalabkaaga Android.
Kala xiriir xulashooyinka bandhigga
Qalabkan cusub ee fiidiyowga ah waxaan ku barayaa inaad xakameyso xulashooyinka soo-bandhigidda ee xiriirada nidaamka hawlgalka Android
DivX Stash, ku samee liisaska liiska muusikada internetka
DivX Stash waxaa loogu talagalay qaab gaar ah dhammaan kuwa shuruud ka dhigaya muusikada internetka, iyada oo aan loo baahnayn in lagu soo dejiyo kumbuyuutarka.
Sida Loogu Keeno Codsiyada Dhuxusha
Casharradan cusub waxaan ku tusayaa sida loo sameeyo kaydinta dhammaan codsiyada iyo xogtooda iyadoo la adeegsanayo Kaarboon, codsi gebi ahaanba bilaash ah.
Xeedho batari oo le'eg kaarka deynta
Xeedho batari xiiso leh oo leh nashqadda kaarka amaahda $ 25 ayaa dhowaan lagu soo bandhigay suuqa.
Sida loo isticmaalo kaydinta barnaamijka Android ee kombuyuutarka, Google Play
Google Play waa nooca websaydhka ee dukaanka arjiga ah ee loo yaqaan "Android Play Store", tilmaantan oo tallaabo-tallaabo ah waxaan ku tusinaynaa sida saxda ah ee loo isticmaalo.
Taleefanka gacanta ayaa ka muuqda Shiinaha isaga oo wata batari dhan 5000 Mah
Taleefanka gacanta ee Shiinaha ayaa soo jeedinaya shaashad 4.5-inji ah iyo batari 5000 mA ah, isagoo hubinaya inuu aad u caato noqon doono sida kuwa kale.
Gawaarida Gawaarida Gaarka ah ee loogu talagalay Samsung Galaxy S2
Samsung waxay soo jeedineysaa in loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S2 qaab aad u fudud Jelly Bean iyadoo la adeegsanayo kombiyuutarka Windows 7.
Sida looga arko Twitter qaabka PC-ga aaladdaada moobaylka
Khiyaano fudud oo aad ku aragto bogga Twitter-ka ee qaabka desktop-ka caadiga ah, oo ah isla sida aad uga arki karto kombuyuutarkaaga shakhsi ahaaneed.
6 Barnaamijyo Faa'iido leh marka aad "xidid tahay" (II Dhexdhexaad heer sare ah)
Hagaag, maanta waxaan kuu keenayaa 6-da barnaamij ee kale, qaarkood way ka dhib badan yihiin wax ka qabashadooda waana khatar badan ...
Sida loo abuuro koonto cusub oo Gmail ah qalabkaaga Android
Casharro cusub oo loogu talagalay dadka isticmaala bilowga ah ee nidaamka hawlgalka Android kaas oo aan ku abuuri doonno akoon cusub oo Gmail ah tallaabo tallaabo ah.
Sida loola wadaago xiriirkaaga xogta aaladaha kale
Casharka fiidiyowga ayaa loo sharxay talaabo talaabo ah si guul leh loola wadaago isku xirnaanta xogta Android ee qalabka kale.
Google Translate waa la cusbooneysiiyay si ay u bixiso qaab qad la'aan
Cusboonaysiintaan ugu dambaysa ee Tarjumaadda Google, qaabka qad la'aanta ama qad la'aanta ayaa lagu daray si aan loogu baahnayn xiriir xog firfircoon.
Sida loo rakibo Khadka kombiyuutarkaaga gaarka ah
Cashar fudud oo lagu helo Khadka bilaashka ah ee bilaashka ah kuna rakibo kombuyuutarkaaga shaqsiyeed. Waxaa ku jira fiidiyow leh tilmaamo tallaabo-tallaabo ah.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan ahaanshaha "Xidid"
Waad salaaman tihiin dhammaantiin maqaalkeygii ugu horreeyay waxaan go'aansaday inaan idinka dhigo hage yar oo ah waxa uu noqonayo "xidid", ilaa ...
Toddobaadka ugu fiican ee Androidsis
Isku soo wada duuboo maqaallada ugu wanaagsan ee lagu daabacay barnaamijka 'Androidsis' oo soo koobid ah si aad uga warqabto waxa ugu fiican usbuuca
Cusbooneysiinta Jelly Bean ee Motorola Electlect 2
Motorola Electlect 2 wuxuu ku cusbooneysiin karaa Jelly Bean Android 4.1 tartiib tartiib ah.
Jelly Bean iyo Windows 8 oo ku yaal Asus Transformer AIO
Asus Transformer AIO waa kumbuyuutar All-in-One ah oo lagu soo bandhigay Spain wuxuuna isu beddelaa kaniiniga weyn ee Android.
Ma mudan tahay in la bixiyo isticmaalka WhatsApp?
WhatsApp wuxuu joojiyaa adeegiisa si bilaash ah. Si aad usii wadato adeegsiga waa inaad bixisaa 0,89 senti sanadkii, ma mudan tahay in la bixiyo?
Cillad amniga cusub ah ee Samsung Galaxy oo leh Android 4.1.2
Cilad cusub oo dhanka amniga ah ayaa laga helay aaladaha Samsung Galaxy ee ku shaqeeya Android 4.1.2. Cayayaankaan wuxuu kuu ogolaanayaa helitaanka desktop-ka weyn
TheftSpy - codsi lagu soo celinayo moobilkii la xaday
Codsi xiiso leh oo ay soo saareen XDA Developers oo loogu magac daray TheftSpy ayaa kaa caawin kara soo kabashada taleefannada gacanta ee la xaday.
Waxaa macquul ah mararka qaarkood, ka dib markii lagu dhejiyo kordhinta Google Chrome, biraawsarku wuxuu bilaabay inuu xiro ama joogo ...
Dhowr jeer ka hor waxaan ku tusay tijaabo Google ah oo badalka badhanka badhanka madow u beddelay cawl. Kadib markaan ku tusay sida ...
Sidee kacaanku tikniyoolajiyadda u saameyn doonaa taleefannada casriga ah?
Kacaanka tikniyoolajiyadda ayaa u qaadaya taleefannada casriga ah heer cusub. Lix sheeko oo imaan doonta toban sano kadib aaladaha aan jecel nahay.
DoCoMo waxay soo bandhigeysaa codsi tarjumaad isku mar ah
Maalin kasta amarka dhowr luqadood ayaa ka muhiimsan. Adduunyada, inkasta oo luqadda Cervantes ay tahay ...
Fur Google Chrome had iyo jeer la weyneeyo
Haddii ay kugu dhacdo adiga oo kale aniga oo aad jeceshahay inaad had iyo jeer u isticmaasho barnaamij ama daaqad kasta aragtida la kordhiyay, laga yaabee ...
Daawada ugu fiican ee loogu talagalay Android
Aad ayey muhiim u tahay in laga ilaaliyo terminaalkeena Android ka ilaalin marin la'aanta ama infekshinka fayras ee ...
Qaamuuskaaga Android, ogow ereyada loo isticmaalo Android
Maanta waxaan kuu keenay qaamuuskan Android si aad u fahmi karto wax kasta oo la xiriira taleefannada casriga ah isla markaana aad iyaga dhex dhexaad ka noqon karto adigoon wax shaki ah ka qabin.
Xeedho wireless ah Nexus 4 ayaa hadda saaran Google Play
Taleefanka gacanta ee Nexus 4 ayaa hadda lagu soo oogi karaa iyada oo aan loo baahnayn fiilooyin iyada oo ay ugu wacan tahay qalabka laga heli karo Google Play Store
Maxaa ku cusub Android 4.2.1
Android 4.2.1 waa kan. Qalabyo aad u tiro badan ayaa loo cusbooneysiiyay nooca ugu dambeeya sidaa darteed waxaan dooneynaa inaan shaaca ka qaadno wararka noocaan ah Android.
Mega app-kiisii ​​ugu horreeyay ee Android: MegaManager
Ku xakamee adeegga cusub ee soo degsashada 'Mega' ee mobiilkaaga 'MegaManager', oo ah codsigii ugu horreeyay ee la jaan qaada barnaamijka Android
Kaarboon, macmiilka cusub ee Twitter ee loogu talagalay Android
Kaarboonku waa mid ka mid ah macaamiisha ugu dhammaystiran uguna wax ku oolsan Twitter-ka Android ee hadda diyaar u ah ka soo dejinta Google Play Store.
Degso cinwaanno loogu talagalay fiidiyowyada YouTube
Mid ka mid ah xulashooyinka badan ee ay YouTube na siiso ayaa ah inaan dhexgalno cinwaanno hoose fiidiyowyada aan soo dhigno. Haddii qaar ka mid ah ...
Khamrigu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku socodsiiso barnaamijyada Windows-ka Android-kaaga
Khamrigu si fiican ayaa looga yaqaan deegaanka Linux maaddaama ay u oggolaaneyso rakibidda barnaamijyada Windows qaybintaan bilaashka ah. Wine-na wuxuu doonayaa inuu aado Android.
Capptura ayaa ka digaya haddii qof isku dayo inuu furo taleefankaaga casriga ah
Capptura waa codsi Isbaanish ah oo kuu soo diraya sawir, lagana qaaday kamaradda hore ee taleefankaaga, haddii qof isku dayo inuu furo
Demi hab qarsoodi la'aan Google Chrome
Maanta waxaan kuu keenay xeelad aad ku joojiso habka qarsoodiga ah ee Google Chrome ku daro. Haddii sabab kasta aad rabto inaad iska ilaaliso ...
WindowsAndroid, habka ugu wanaagsan ee loogu daydo Android
WindowsAndroid waa codsi xiiso leh oo loogu daydo Android 4.0 nidaamka qalliinka Microsoft
Ku jooji Aero Glass Google Chrome
Google Chrome wuxuu leeyahay badhan qarsoon oo noo ogolaanaya inaan dhaqaajinno oo aan shaqeyno Aero Glass ee biraawsarka, halka ...
Cusbooneysiinta Jelly Bean ayaa loogu dhawaaqay Samsung Galaxy S2 bil kale
Samsung Galaxy S2 ayaa laga yaabaa inay cusbooneysiiso Android 4.1.2 iyada oo loo marayo nidaamka Samsung Kies bilowga Febraayo.
WhatsApp hadda waxay aqbashay lacagaha Google Play
Adeegga lacag bixinta ee dukaanka Google Play wuxuu hadda ku shaqeeyaa iyada oo loo marayo liis fudud oo gudaha ah oo ku jira barnaamijka WhatsApp
Telefoonka Ubuntu, Kanonikal si uu ugu guuleysto taleefannada casriga ah
Telefoonka Ubuntu waa sharadka Canonical qaab qaab hawlgal oo loogu talagalay taleefannada casriga ah iyo taleefannada casriga ah ee la filayo inuu noqdo dareenka xilligan.
Koonfurta Kuuriya waxay dalban doontaa in lagu daro codsiyada amniga mobilada
Marka la isku daro barnaamijyada khaaska ah, Kuuriyada Koonfureed waxay u soo jeedineysaa soo saarayaasha mobilada inay ka fogaadaan xoogsheegashada internetka.
U isticmaal Emma inaad ku shubato Sony Xperia si fudud
Emma waa codsi yar oo Android ah oo aan u isticmaali karno inaan ku shidanno taleefannadeena Sony Xperia.
Kiiboodhka jeex - kumbuyuutarka oo dhan u xanaaqsan isticmaalayaasha Android iyo cayaartoyda
Kiiboodhka jeexku waa codsi xiiso leh oo loo yaqaan 'Android' oo looga shaqeeyo kiniiniyada 7 inji iyo wixii ka dambeeya, isagoo beddelaya kiiboodhka caadiga ah ee caadiga ah.
Batariga cusub oo labo jeer ka awood badan Samsung Galaxy Note 2
Batariga cusub oo leh awood dheeri ah si loo laba jibaaro awoodda Samsung Galaxy Note 2 ayaa la iibiyay tan iyo bishii Diseembar 21, 2012.
Launcher qaabka Windows 8 oo bilaash ah
Bilaabe bilaash ah qaabka ugu nadiifsan ee Metro ee Windows Phone 8 ee Android-kaaga kaas oo ku siin doona isbeddel hawo nadiif ah
PlaceRaider, oo ah kharribaad ay soo diyaarisay Pentagon-ka
PlaceRaider waa codsi ay soo diyaarisay Pentagon-ka oo sawirro ka qaata kamaraddaada oo dib ugu curinaysa deegaanka saddex dhinac.
Dagaalkii shatiga: Google vs Apple iyo Microsoft
Google iyo nidaamka ay ku shaqeyso ee Android waxay wajahayaan cabashooyin cusub oo taxane ah oo ka imanaya shirkadaha Apple iyo Microsoft ee Mareykanka
Android 4.2 wuxuu ku dhow yahay inuu soo dego. Waxaan soo bandhigeynaa warkeeda oo dhan
Imaatinka dhow ee Android 4.2, dhammaan wararka ku saabsan nooca ugu dambeeya ee nidaamka hawlgalka Google ee guuleysta ayaa la muujiyay.
Sida loo dhigo sawirada xiriirka Google Go'aanka Sare
Sawirada HD ee xiriirada waxaan ku badalidoonaa sawiradeena xiriirada Google kuwa leh qaraar gaaraya 256 mpx.
Vodafone Cloud, amniga iyo keydinta daruuraha
Vodafone wuxuu ku biirayaa isbeddelada siyaasadeena iyo dalabkeena, sida Movistar iyo Yoigo, waxayna bixisaa adeeg kaydinta oo loo yaqaan Vodafone Cloud
Facebook ee loogu talagalay Android, barnaamij asal ah dhammaadkii 2012
Nooca cusub ee Facebook ee loogu talagalay Android ayaa la heli doonaa ka hor dhammaadka sannadka 2012, wuu ka dhakhso badan yahay waxaana loogu talagalay inuu yahay barnaamij ku shaqeeya Android
Qaabka isku xidhka ee APN cusub ee isku xidhka xogta ee qalabkaaga mobilada
Sida loo soo celiyo keydka galka EFS
Cashar fudud oo fiidiyow ah si loo soo celiyo galka EFS ee ku yaal Android.
Sida loo kaydiyo galka 'EFS'
Cashar fudud oo lagu helo nuqul keyd ah galka EFS
Sida looga dhigo Android kaaga mid u eg Windows Phone oo leh Launcher 7
Launcher 7 waa Launcher ama Guriga beddelkiisa, kaas oo aan ku siin doonno dhammaan muuqaalka Windows Phone qalabkeenna Androd.
Qalab casri ah oo Android Jelly Bean ah
Qalab cusub oo loo yaqaan 'android launcher' oo loogu talagalay in lagu matalo qaabka muuqaalka ee Android Jelly Bean
Antiroid, raadso waxyaabo kale oo bilaash ah oo ku saabsan codsiyada lacag bixinta
Antiroid waa degel u heellan inuu na tuso waxyaabo kale oo bilaash ah oo lagu beddelo barnaamijyada caanka ah ee Android.
Samsung Galaxy SIII: Sida loo xidido iyo ka soo kabashada hal talaabo
Cashar fudud oo lagu sameeyo xididka iyo soo kabashada Samsung Galaxy SIII hal talaabo
WhatsApp for Android wuxuu helayaa cusbooneysiin
Cusbooneysiin cusub oo WhatsApp ah oo loogu talagalay Android ayaa la sii daayay oo ay ku jiraan horumarinno kala duwan iyo waxyaabo cusub, iyo sidoo kale sixitaanno guud.
Sida loo abuuro kayd adoo isticmaalaya Titanium Backup
Video-tutorial ku saabsan sida loo abuuro kayd iyo dib u soo celin soo socota adoo adeegsanaya Titanium Backup
Sida loo waafajiyo aaladaha Android-ka ee iTunes-ka ah
Sida loo waafajiyo aaladaha Android-ka ah ee loo yaqaan 'iTunes' iyo 'DoubleTwist Player', oo ah codsi bilaash ah oo labada Android, Mac iyo Windows labadaba ah
Cilmi-baadhayaashu waxay saadaalinayaan mawjad khayaano ah oo ku saabsan Android
Shirkadda amniga ee Trend Micro ayaa ka digtay in qaybinta malware-ka ku dhaca Android ay si aad u daran u sii xoojin doonto dhammaadka sanadka.
Sida loo rakibo Ubuntu qalabkaaga Android
Casharro ku saabsan sida loo soo dejiyo oo loogu rakibo Ubuntu qalabka leh nidaamka hawlgalka Android
Android 4.1 ma taageeri doono Flash Player
Adobe ayaa shaacisay in android 4.1 Jelly Bean aysan wax taageero ah uheyn doonin Flash Player isla markaana ay xadidi doonto soo degsigeeda Google Play.
La kulan 9-ka astaamood ee cusub ee Android 4.1 Jelly Bean ay ku darto
Waxaan sharaxeynaa sagaalka sheeko ee cusub ee Android 4.1 Jelly Bean ay kujirto, laguna soo bandhigey shirkii I / O Google
MiHome, MIUI oo bilaabay Google Play
Kooxda horumarinta ee caanka ah MIUI ROM ayaa si rasmi ah u sii daayay Launcher-keeda rasmiga ah ee guriga shaqsi ahaan Google Play Store.
Sida loo rakibo APK-ka Windows-ka iyadoo la adeegsanayo mashiinka farsamada iyo Android SDK
Video-tutorial ku saabsan sida loo rakibo barnaamijyada Android ee asalka u ah Windows, tan waxaan u isticmaali doonaa Android SDK iyo terminalka Ms-dos.
Sida looga daydo Android-ka Windows
Cashar fudud oo aad kudayasho karto Android-ka Windows, adoo ku rakibaya mashiin macmal ah Maamulaha SDK Android.
Sida loo rakibo Android SDK-ka Windows 7
Fudud-fiidiyow-fudud ah oo ku saabsan sida loo rakibo Android SDK-ka Windows 7, ka dibna rakib mashiin farsameed.
Rasmiga rasmiga ah ee loo yaqaan 'Androidsis App' waxaa laga heli karaa Play Store
Premiere ee Dukaanka Play-ka ee dalabka cusub ee androidsis-ka ah, kaas oo aad si buuxda ugu heli karto barta androidsis.com
U soo dejiso S-Voice Samsung-kaaga oo wata Android 4.0
XDA waxay daabacday .apk-ka S-Voice ee Samsung Galaxy S3 inta hartay Samsung terminals-ka leh Android 4.0
Sida loo xidido terminal-kaaga Android-ka leh SuperOneClick
Iyada oo la adeegsanayo SuperOneClick, waxaan awoodi doonnaa inaan rujinno tiro badan oo qalabka Android ah si aad u fudud oo fudud.
Ciyaaryahan sabeynaya, Soo-Daaqid Muuqaal fiidiyow ah
Ciyaaryahan sabayn waa codsi cusub oo kuu oggolaanaya inaad ku raaxeysatid howlaha cusub ee Pop-Up Play ee Galaxy S3 taleefan kasta oo Android ah.
DX Batariga Kordhiye, lawareeji batterigaaga
Batariga Kordhinta waa codsi ka yimid Play Store oo naga caawin doona isticmaalka iyo dayactirka batterigayaga Android.
Xayeysiinta baarka ogeysiiska? Ku hagaaji Qalabka AirPush
Sida looga saaro xayeysiinta iyo xayeysiiska ka muuqda baarka ogeysiiska Android ee leh AirPush Detector, kaas oo lagu ogaado barnaamijyada masuulka ah
Ciyaar-ka-soo-saariddu waxay kor u qaadaysaa shaqooyin badan illaa heerka xiga ee Galaxy S3
Ciyaaraha pop-up-ka ee Samsung ayaa u oggolaanaya Galaxy S3 inuu fiidiyoow ku arko dusha sare ee dalabka aan dooneyno inaan adeegsanno, daaqad yar
Hacker wuxuu daabacaa Google Play isagoon ilaalin gobolka.
Maanta internetka, ku dhowaad dhammaan caqabadihii juqraafi ee jiray ayaa la tirtiray. Waad is xiriiri kartaa, wax wadaagi kartaa, la hadli kartaa, daawan kartaa, iwm. qof kasta oo ka socda adduunka oo dhan. Taasi waa sababta dadka isticmaala Android ay ula yaabaan sababta weli ay u jirto xannibaad goboleed Google Play (suuq hore). Kuwii idinka mid ah ee aan ogaanin, waxaa jira codsiyo, oo ku xidhan waddanka aad ka xiriirtaan, la heli karo ama aan la soo dejisan karin.
Scalado Ka saar, ka saar walxaha aan loo baahnayn ee ku jira sawiradaada.
Ka qaadista Scalado waxaan ku baabi'in karnaa walxaha aynaan rabin wax sawir ah. Waxaan si fudud u qaadaneynaa sawirka oo aan taabaneynaa walxaha aynaan rabin inay soo baxaan. Markaa waan tirtiri karnaa dadka, walxaha, xayawaanka, iwm ee dhaqdhaqaaqa ku jira oo aan ka careysiin karno sawirrada aan qaadno.
Baxnaaninta Xawaaraha Tooska ah: Waraaq yar oo aad u yar oo Android ah
Baxnaaninta Xayawaanka Dahabka ah waa muuqaal asal ah oo loogu talagalay Android, oo leh qaab qumman oo qumman si loo daboolo baahida adeegsadayaal badan oo leh nidaamyo badan oo ku habboon.
Jelly Bean Android 5.0 Qeybtii labaad ee 2012?
Google wuxuu damacsan yahay inuu dedejiyo habka wax soosaarka nooca 'Jelly Bean 5.0', waxaa ku jiri doona isugeyn Windows 8 ah si aan ugu raaxeysan karno labada madal
Google waxay kugula talineysaa inaadan ku isticmaalin Google Wallet qalabka xididaysan
Shirkad ayaa ogaatay cillad dhanka amniga ah oo kujirta lacag bixinta Google Wallet dhammaan aaladaha xididaysan.